News - kindsdị ọzụzụ dị arọ nke 5 iji tụnyere ọzụzụ dị arọ bụ eze nke ọzụzụ dị arọ
Enwere ike kewaa ọzụzụ dị iche iche n'ụdị ise: ọzụzụ onwe onye, ​​nkuzi mmegide nguzo, ọzụzụ igwe, ọzụzụ ụdọ na ọzụzụ nnabata n'efu. Typesdị egwuregwu ise a nwere uru na ọghọm ha na nchekwa na ike ahụ, ọzụzụ ọzụzụ na-enweghị atụ n'iji mgbịrịgba na dumbbells bụ eze nke ọzụzụ ibu.
E nwere imerime mmughari ihe, nke nwere ike nkewa dị ka akụrụngwa eji. Na mgbakwunye, ụdị usoro ọzụzụ ọ bụla nwere uru na ọghọm ya, yabụ ị ga-ebu ụzọ ghọta njirimara nke ụdị nwughari ọ bụla tupu ị họrọ ọrụ kwesịrị ekwesị.
Typesdị ọzụzụ dị arọ nwere ike gbasaa n'ụzọ dị iche iche na "ọzụzụ onwe onye" nke na-anaghị eji akụrụngwa ma dabere kpamkpam na ibu nke onwe ya, "ọzụzụ mmachi nguzogide" nke na-eji ndị agha na-eguzogide, "ọzụzụ igwe" nke na-eji igwe ọzụzụ, "ọzụzụ eriri ”Nke na-eji ụdọ, na ụdị ise nke“ ọzụzụ ibu n’efu ”na-eji dumbbells ma ọ bụ barbells.
Nzuzo, ụdị ọzụzụ ọ bụla na-ekpuchi ahụ ike. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eji "ọzụzụ akpaka" na "ọzụzụ igwe" iji mepụta otu akwara ahụ, mmetụta ga-adị iche na nsogbu nke mmezu na ibu e jiri mee ya, yabụ gbanwee ụdị usoro ọzụzụ dabere na akwara lekwasịrị anya, ma ọ bụ jiri ọtụtụ ụdị nke You nwere ike nweta nsonaazụ ọma site na ịme otu ahụ ahụ n'otu ụzọ ahụ.
A na-akpọ ụzọ ọzụzụ dị ukwuu dị ka iguzo ọtọ ma ọ bụ iji ibu ahụ gị na-eme ihe uru nke afọ gị “ọzụzụ onwe onye.”
Nnukwu uru nke ọzụzụ nkuzi bụ na ịkwesighi iji akụrụngwa ọ bụla. Ndị mmadụ na-enweghị oge ma ọ bụ mmefu ego iji gaa mgbatị ahụ nwekwara ike ịme ọzụzụ onwe ha n'ụlọ ha na-enweghị ọkara ọkara dime.
Ọzọ uru nke autologous ọzụzụ bụ na ọbụna oké ọzụzụ novices nwere ike n'enweghị ihe ịma aka ókè akparaghị ókè na-echegbu onwe banyere nsogbu nke barbells ma ọ bụ dumbbells adapụ.
Logozụ ọzụzụ nke onwe dị iche na ọzụzụ dị arọ site na iji akụrụngwa ma ọ bụ akụrụngwa, ọ nweghịkwa ụzọ ga-esi masị nke ibu ahụ. Ọ bụrụ na ibu ahụ dị oke oke, ọ gaghị enwe mmetụta zuru ezu. Ọ bụrụ na ibu ahụ dị oke arọ, ọ gaghị enwe ike mezue ọnụ ọgụgụ kwesịrị ekwesị nke oge n'ụzọ ziri ezi, na mgbe ike akwara siri ike ruo ogo ụfọdụ, enweghị ike ịbawanye ibu ahụ. N'oge a, ọ na - ewe oge iji dozie nnukwu ibu dị ka ihe achọrọ si dị.
Training Ọzụzụ ịgba mgba
Ọ bụ ezie na a ga-akwadebe ngwaọrụ maka "ọzụzụ mmachi iguzosi ike", enwere ike ịrụ ya n'ụlọ dịka ọzụzụ onwe onye, ​​ọ ga-adị mfe ịme njem azụmahịa ma ọ bụ njem.
Na mgbakwunye, naanị ịgbanwe ọnọdụ nke ndị na-eguzogide ma na-edozi ogologo nwere ike ibuwanye ma ọ bụ belata ibu ahụ n'ụzọ dị mfe. Otu ndị agha na-eguzogide ọgwụ nwekwara ike ịgbanwe ọtụtụ ihe, nke enwere ike ịsị na ọ bụ usoro ọzụzụ dị ukwuu.
Site na echiche nke ọzụzụ ọzụzụ, ike gwụrụ na-emetụta obere ọzụzụ, ọ nweghịkwa ibu ibu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara ahụ dum. Ọ nwere ike ibute kemistri abụọ nke "nchịkọta nke metabolites anaerobic" na "ọnọdụ hypoxic". Mmekọahụ iji nweta mmetụta muscular.
N'aka nke ọzọ, esemokwu nke ndị na-eguzogide na-agbanwe nke ukwuu na ogologo ya, yabụ na ọnọdụ izizi ebe ndị na-eguzogide ọgwụ ka dị mkpụmkpụ ma dị mkpụmkpụ, ibu dị na akwara ahụ dịkwa obere.
Mgbe a na-eji bandị ahụ na-eguzogide, ibu ahụ pere mpe mgbe akwara na-agbatị mgbe akwara na-arụ ọrụ, ya mere, ọ na-esiri ya ike imebi emebi nke uru ahụ, n'ihi ya, ọ na-esiri ike ịkwalite uto ahụ na nke a.
Training Nkuzi usoro
Njirimara nke "ọzụzụ igwe" bụ na ọ dị mma mgbe ịdị arọ bụ otu ihe dị ka iji ọzụzụ barbell.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-egbochi usoro mmegharị ahụ site na usoro ihe eji arụ ọrụ, ya mere, site na nhụsianya nke nsogbu nke ịmụgharị mmegharị ahụ, ọ dị mfe karịa usoro ọzụzụ ndị ọzọ, ọ dịkwa mfe inwe mmetụta na akwara ahụ.
Imirikiti igwe ọzụzụ dị arọ na-eji blọt na-ebu ibu, na enwere ike idozi ibu ahụ n'ụzọ dị mfe site na ịkpụzi mkpọchi ahụ. Ya mere, mgbe a gbanwere ibu nke otu ihe niile n'otu oge n'oge mgbatị ahụ, ọ dịghị mkpa ịrụ ọrụ gabiga ókè.
Ọ bụ ezie na usoro ihe eji arụ ọrụ ahụ kwụsiri ike, ike esemokwu dị n'etiti njikọ aka, ibu ibu na egwu ga-emetụta agbadata (mgbatị eccentric) ma belata ibu ahụ. Agbanyeghị na nsonaazụ esemokwu dị iche iche site na igwe na igwe, ọ na-ebu ibu na mọzụlụ n'oge mgbatị nke eccentric, nke bụ igodo iji kwalite mmepe akwara, yabụ ị ga-elebara nke a anya mgbe ị na-etinye ọzụzụ igwe.
Na mkpokọta, ọzụzụ igwe bụ usoro ọzụzụ nwere ọtụtụ uru.
Training Ọzụzụ eriri
"Ọzụzụ eriri" bụkwa nke ụdị ọzụzụ nhazi, mana ebe a ka anyị ga-ewebata ihe ọzụzụ igwe na-eji ụdọ n'adabereghị.
Ọzụzụ eriri nwere ike idozi ibu dị mfe dị ka ọzụzụ igwe, nke na - enyere aka ịkatọ oke akwara. Tụkwasị na nke a, igwe ọrụ izugbe nwere ike ịgbanwe ọnọdụ mmalite nke eriri ahụ, ka o wee nwee ike ịga n'ihu na-ebu ibu na akwara site n'akụkụ niile na-enweghị mmetụta nduzi nke ike ndọda. Ọbụna akụkụ ndị na-arụsi ọrụ ike dịka ọzụzụ ọzụzụ dị arọ na ọzụzụ autologous nwere ike ibute ibu dị mfe.
Training Ọzụzụ adịghị arọ
"Free ọzụzụ ọzụzụ" iji barbells ma ọ bụ dumbbells bụ eze nke ibu ibu.
Mgbe ịmara, ị nwere ike ọ bụghị naanị ịma aka nnukwu ibu, kamakwa ị gaghị efufu ibu ahụ n'ihi esemokwu n'oge nkwekọrịta nke centrifugal dị ka iji igwe.
Tụkwasị na nke ahụ, ọzụzụ ọzụzụ na-adịghị akwụ ụgwọ na-ejikarị ọtụtụ akwara akwara, nke nwere ike mepụta mmega ahụ dị mfe. Trainingzụ ọzụzụ n’efu na-etinye nrụgide dị ukwuu n’ahụ ahụ dum ma na-enyere aka kpalipụta secretion hormone iji kwalite mmepe ahụ ike.
Ndị ga-achụso ọzụzụ ọzụzụ dị elu tupu ha agaa mgbatị ahụ nwere ike chọọ iji ụfọdụ mmemme ọzụzụ ibu n'efu.
Otú ọ dị, ọzụzụ ọzụzụ dị arọ anaghị enwe usoro mmegharị a na-agbanwe agbanwe, ọ na-esikwa ike ịnọgide na-enwe usoro ije ziri ezi n'oge usoro ọzụzụ, ya mere, ọ bụghị ihe omimi na mmetụta adịghị arụ ọrụ n'ihi ọnọdụ na-ezighi ezi. Obere akpachapụghị anya n'oge ọzụzụ nwere ike ibute mmerụ ahụ.
A na-ekwenyekarị na ọzụzụ ọzụzụ dị arọ bụ "kwesịrị ekwesị maka ndị agha na-enye ọzụzụ dị arọ," mana ọ bụrụhaala na ebubeghị ibu karịa ikike, enweghị ihe egwu. Womenmụ nwanyị na ndị ọzụzụ ọzụzụ dị oke egwu nwere ike ịnwale ya.